Kukanda sevhisi - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Tsika Kufa-Kudzinga Sevhisi-OEM China Kufa-kukanda Zvikamu Mugadziri
Ouzhan ndiye mutungamiri wenyika mune chaiyo kufa kukanda, anga ari nyanzvi yekupa nyanzvi yehunyanzvi kufa yekukanda masevhisi kwemakumi emakore. Kunyange zvazvo Ouzhan'sroots avete yedu proprietary multi-yemasiraidhi kufa vachikanda maitiro isu takaenzana takasimba mukugadzirwa kwezvikamu zvakakura neyakajairika inopisa uye inotonhorera kamuri kufa inokanda nzira.
Kufa kwekukanda inzira yekutsanya, isingadhuri yekugadzira nzira yekugadzira yakakwira vhoriyamu, yakaita netambo, yakasimba kushivirira simbi zvinhu. Kazhinji, kufa zvikamu zvekukanda zvinogona kuunganidzwa uye kuiswa pasina kumwe kutendeuka, uye zvakapetwa zvikamu zvinogona zvakare kukandwa zvakananga. Iyo furu ine hupenyu hwakareba, uye iyo yekufa ichikanda muforoma kazhinji inogona kuburitsa chero nhamba yezvinhu, kubva kumazana ezviuru kusvika kumamirioni.
Kubva kuzvidimbu zvidiki senge zvikamu zvekamera, zvikamu zvetapureta, zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi uye zvishongedzo, pamwe nezvikamu zvakaoma zvemotokari senge mota, locomotives, nendege, mazhinji acho anogadzirwa nekufa kwekufa.
Ouzhan Precision Die Kukanda Simba uye Zvimiro:
- Inodhura-inoshanda yakawanda kugadzirwa
- Kubatana kusarura kunobvisa mashandiro
- Kugona kwekugadzira zvimiro zvakaoma
- Yakagadzikana yepamusoro mhando mukugadzirwa kwemazhinji
- Tight tolerances mu kufa vachikanda
- Hupenyu hwakareba hwevhu
Nei Uchisarudza Ouzhan Die Casting Services
1. Kana tagamuchira kubvunza kubva kumutengi, isu tichaitisa yekutanga ongororo kuti tione kana tichigona kuburitsa. Kana zvichibvira, uye mushure mekunge chirongwa chabvumidzwa, isu tinotumira iyo kotesheni.
2. Yedu sevhisi kuyerera kwezvirongwa zvitsva
• Makasitoma anoisa mafuru uye sampuli odha.
• Isu tinoburitsa PI pa50% yemutengo weforoma kubhadhara dhipoziti.
• Tumira mutengi muforoma dhizaini vanodhirowa kuti vabvumidzwe.
• Tanga kugadzirwa kweforoma mushure mekugamuchira 50% dhipoziti.
Tumira masampuli uye mamwe maodhidhi senge zvinhu setifiketi uye yekuongorora mushumo kuti ubvumidzwe.
• Kugadzirwa kweMisa mushure mokubvumidzwa kwemasampuli.
Isu tine mainjiniya gumi munzvimbo yedu yeR&D, vese vari vanachiremba kana mapurofesa kubva kuYunivhesiti yeSainzi neTekinoroji yeChina. Tinogona kupa inonyanya nyanzvi kufa vachikanda muforoma dhizaini masevhisi.
Chii Chinofa Die Kukanda Sevhisi & Maitiro Ekufa Kukanda Kunoshanda
Die vachikanda inonziwo kumanikidzwa Kudzingwa. Iyo inzira yekukanda iyo yakanyungudutswa chiwanikwa mvura inodururwa mukamuri yekudhinda, iyo mhango yesimbi muforoma inozadzwa nekumhanyisa, uye iyo alloy mvura inosimbiswa pasi pekumanikidzwa kuti iite kukanda. Huru hunhu hwekufa kufa uchikusiyanisa kubva kune dzimwe nzira dzekukanda kwakanyanya kumanikidza uye kumhanya kwazvo.
① Iyo simbi yakanyungudutswa inozadza mhango iri pasi pekumanikidzwa, uye inojekesa uye inosimbisa pasi pekumanikidza kwakanyanya, iko kumanikidza kuri 15-100MPa.
Metal Iyo simbi yakanyungudutswa inozadza mhango nekumhanyisa, kazhinji 10-50 metres pasekondi, uye mamwe anogona kupfuura mamita makumi masere pasekondi (kumhanya kunowirirana kwedenga kuburikidza negedhi remukati-iro remukati gedhi kumhanya), saka simbi yakanyungudutswa Iyo yekuzadza nguva ipfupi zvakanyanya, uye iyo mhango inogona kuzadzwa mune angangoita 0.01-0.2 masekondi (zvinoenderana nesaizi yekukanda).
Zvakanakira kufa uchikanda zvinosanganisira zvakaenzana zvekupenya kurongeka kwe castings. Kazhinji izvi zvinoenderana nezvinhu zvekukanda. Iyo chaiyo kukosha ndeye 0.1 mm kweiyo yekutanga 2.5 cm saizi, uye 0.002 mm kune imwe neimwe yekuwedzera cm. Inofananidzwa nedzimwe nzira dzekukanda, kukanda kwayo pamusoro kwakatsetseka, uye iyo fillet radius inenge 1-2.5 microns. Inofananidzwa nejecha rejecha kana nzira dzechigarire dzekukanda michina, castings ine ukobvu hwemadziro ingangoita 0.75 mm inogona kugadzirwa. Iyo inogona kukanda zvakananga zvivakwa zvemukati, senge waya dzesimbi, kudziyisa zvinhu, uye yakakwirira-simba inotakura nzvimbo. Zvimwe zvakanakira zvinosanganisira kugona kwayo kudzora kana kudzivirira kwechipiri machining, yekumhanyisa yekumhanyisa mhanyisa, kukanda yakasimba tensile inosvika 415 MPa, uye yakakwira fluidity simbi kukanda.
Kufa kukanda Zvishandiso - Zvishandiso Zvakashandiswa Kufa Kukanda
Iyo simbi inoshandiswa kufa ichikanda kunyanya inosanganisira zinc, mhangura, aluminium, magnesium, lead, tin, uye lead-tin alloys. Kunyangwe kufa-yakakandwa simbi isingawanzo, zvakare zvinokwanisika. Mamwe akakosha kufa-achikanda simbi anosanganisira ZAMAK, aluminium-zinc alloys uye zviyero zveAmerican Aluminium Association: AA380, AA384, AA386, AA390 uye AZ91D magnesium. Hunhu hwesimbi dzakasiyana ndedzinotevera:
Zinc: Iyo simbi iri nyore kufa-yakakandwa, ine mari kugadzira zvidimbu zvidiki, nyore kupfeka, yakasimba simba, simba repamusoro, uye hupenyu hwakareba hwekurasa.
Aluminium: Yakareruka, yakaoma kugadzira uye yakatetepa-yakakomberedzwa castings vane yakadzama dimensional kudzikama, yakasimba ngura kuramba, yakanaka michina zvivakwa, yakanyanya kupisa uye magetsi conductivity, uye yakakwira simba pakakwirira tembiricha.
• Magnesium: iri nyore kugadzirwa, yakasimba-kusvika-uremu reshiyo, yakareruka pakati pesimbi inowanzoshandiswa kufa-yakakandwa simbi.
• Mhangura: Kuomarara kwakasimba, kurwisa kwakasimba ngura, akanakisa masisitimu eanowanzoshandiswa kufa-kukanda simbi, kupfeka kuramba, uye simba padhuze nesimbi.
• Tungamira uye tini: kukwirira kwakanyanya, kukwirira kwepamhando yepamusoro, inogona kushandiswa seyakakosha anti-corrosion zvikamu. Nezve hutano hweveruzhinji, iyi alloy haigone kushandiswa sekugadzira chikafu uye michina yekuchengetedza. Iyo alloy yemutobvu, tini uye antimoni (dzimwe nguva ine zvishoma zvemhangura) inogona kushandiswa kugadzira bhuku remhando uye bronzing mutsamba yekudhinda.
Iwo epamusoro masosi emiganhu ekufa-kukanda achishandisa aluminium, mhangura, magnesium uye zinc ari 70 lb (32 kg), 10 lb (4.5 kg), 44 lb (20 kg) uye 75 lb (34 kg) zvichiteerana.
Mamwe Anowanikwa Ekukanda Services
Kufa kukanda ingori imwe yeakawanda maitiro ekurasa. Sezvo kumusoro kwerwizi michina kugadzira fekitori, OuZhan inewo zvimwe zvakasiyana-siyana zvekukanda chirimwa zviwanikwa kuzasi kwerwizi. Tinogona kupa vatengi nechero ipi yekukanda sevhisi:
1.Sand muforoma Kudzingwa nzira
Uchishandisa jecha sechinhu chakaumbwa, jecha rine nziyo dzakasiyana dzinogona kuve dzakakamurwa kuita girini jecha muforoma kukanda, pamusoro pakaoma jecha muforoma kukanda, nezvimwewo, asi kwete jecha rese rinogona kushandiswa kurasa. Chakanakira ndechekuti mutengo wakaderera nekuti jecha rinoshandiswa muforoma rinogona kushandiswazve; chinokanganisa ndechekuti kugadzirwa kweforoma kunotora nguva, chakuvhe chaicho hachigone kushandiswa zvekare, uye chigadzirwa chakapedzwa chinogona kuwanikwa chete mushure mekuparadzwa.
2. Metal muforoma kukanda nzira
Shandisa simbi ine poindi yakanyunguduka yepamusoro pane iyo mbishi kugadzira chakuvhuvhu. Pakati pavo dzakakamurwa kuva giravhiti Kudzingwa nzira, pasi kumanikidzwa Kudzingwa nzira uye yakakwirira kumanikidzwa Kudzingwa nzira. Zvichienderana nekunyungudika kweforoma, simbi iyo inogona kukandwa zvakare ishoma.Die kukanda ndeyesimbi simbi muforoma kukanda nzira.
3. Yakarasika nzira yewax
Iyi nzira inogona kuve yekunze firimu kukanda nzira uye yakasimba kukanda nzira. Iyi nzira ine huchokwadi hwakaringana uye inogona kushandiswa kukanda simbi yakanyunguduka (senge titanium). Nekudaro, nekuda kwemutengo wakakwira weceramics, uye kudikanwa kwekudziya kwakawanda uye kugadzirwa kwakaomarara, mutengo unodhura kwazvo.
Zvikumbiro zveDie Casting Services uye Zvikamu
Ouzhan Die Kukanda Pamusoro Panopedza